DOWNLOAD Eurofighter Dutu AlphaSim FSX & P3D - Rikoooo
Created 01-11-2012 02: 37: 16
Akachinja 02-11-2012 00: 27: 46
Nokuti FS2004 enderana shanduro tinya pano
CHERECHEDZA: The FS2004 hud the uye Radar hahuenderani FSX saka haana kuiswawo. The panel.cfg Kurongwa achiripo saka rinogona kutsiva chaigona pasted mukati.
The Eurofighter Dutu iri mapatya-injini, canard-mumahombekombe bapiro, multirole anorwisa.   The Dutu ndiye akasika rakapiwa makambani matatu, EADS, Alenia Aeronautica uye Bae Systems, vachishanda vakabata kambani, Eurofighter GmbH , iyo yakaumbwa 1986. The chirongwa chiri neKomisheni NATO Eurofighter uye dutu Management Agency, iyo anoita sezvo mukuru mutengi.  Eurofighter Dutu iri anogadzirwa serially nokuda EADS, Alenia Aeronautica, uye Bae Systems rakapiwa. The ndege ari akavawanira pasi vakaparadzana zvibvumirano, ainzi tranches, mumwe nokuda ndege pamwe kazhinji hwakavandudzika nezvaanogona. The Dutu akapinda basa pamwe yeAustria Air Force, rokuItari Air Force, yokuGermany Air Force, British Royal Air Force, uye Spanish Air Force, uye Royal Saudi Air Force. (Wikipedia)
Speedbrake - shandisa / kiyi, kana tinya pemapuranga bhatani.
Vachikweva mutserendende - anoshandisa 'neizvi chebasa' chinoratidza FSX / P3D, saka wokudhinda mubatirire F2 kiyi, F1 kiyi Canel.
Ichibhabhamisa - the Dutu chaiyo ine ichibhabhamisa dzayo kudzora kombiyuta saka hapana ichibhabhamisa levers kana gauges pamusoro remadziro. The AlphaSim womuenzaniso kunoratidza ichi, asi ichibhabhamisa zvinogona kushandiswa senguva keypresses. Kune zvitatu chete ichibhabhamisa nzvimbo - zvizere kukwira epakati nzira uye zvizere pasi.
Mutyairi wendege Visors - dzakaderera rwoga masikati
Wedzera vachiongorora - ichi anoshandisa 2nd Exit murayiro. Shandisa zvinotevera keypresses (kana itangezve kuti zvimwewo (yakarumbidza) ari kiibhodhi mabasa) -
Press uye mubatirire chaishanda kiyi, yokuritora ari E kiyi kamwe
Tisunungurirei chaishanda kiyi (kukosha) yokuritora ari 2 kiyi pakarepo (mukati 2 masekonzi rokupfanya E kiyi).
VC haizoshandisi - ose haizoshandisi vari VC vari mousable uye kakawanda kutakura chaiye chinyorwa rondedzero iri Dutu. haizoshandisi ava vasiri basa uye kushanda chete. Vamwe VC haizoshandisi ndanzwira FSX mashandiro, ndivo giya mhikuriso uye kumhara zviedza ufambe kuruboshwe-divi kunyaradza, uye Nav & Panel chiedza haizoshandisi, mafuta cutoff (injini shutdown) chinja uye 2 Starter haizoshandisi kurudyi-kurutivi kunyaradzana.
Shutdown achishandisa VC Minamato haipindurwe - Shutdown ari kuva nekudzvanya ari Fuel Cutoff chinja kurudyi-divi kunyaradza vari VC, iyo chinja ane murindi dzvuku iro anofanira kutanga kutarira. The chinja ANOFANIRA vakadzokera ON nzvimbo kamwe injini iri spooling pasi, zvikasadaro restart haangavi zvinobvira.
Kutanga kushandisa VC Minamato haipindurwe - The User inogona kutanga kana nokutsikirira pasi AutoStart bhatani kuruboshwe yokumusoro emadziro, kana vaviri Starter haizoshandisi angashandiswa kurudyi-divi kunyaradza vari VC. Zvakakosha kuziva kuti, a) chinotsva shutoff anofanira kuva ON chinzvimbo sokurondedzerwa kumusoro, uye b) Starter haizoshandisi vari zvinobudirira 'chitubu-monica', inodzidzisa ane kutinya kuzoitira negonzo pamusoro pavo kusvikira injini ukabata , ichi kazhinji zvinotora anenge 6 masekonzi kwechiropa kunhaka, iyo 'ruoko' Pointer richachinja kuti 'chibhakera' ndikarega ari chinja riri kuitwa. Kana kusunungura chinja 6 masekonzi pamberi kumusoro, uchafanira begine muitiro zvakare. CHERECHEDZA: The Starter haizoshandisi haazorambi kutanga injini kana Ctrl-kuchinja-F1 keypress rakashandiswa kuvhara pasi kare. Injini ipfigwe pasi uchishandisa tsvuku shutdown mabhatani pamusoro throttle kunyaradza kana VC Starter mabhatani zvinofanira kushandiswa. Kana iwe akashandisa Ctrl-kuchinja-F1, ipapo Ctrl-E zvinoda kutanga zvakare.
Rear Cockpit - unogona akamufambisa rwemberi VC nokutsikirira uye vakabata Ctrl-Pinda kusvikira sangano rinomira. Zvadaro womupepanhau kuchinja-Pinda kurera nemaonero sezvo uchange agere zvakare pasi. Dzokera pedyo kana reselecting Dutu kana kudzvanya Ctrl-backspace kuenda mberi zvakare, ipapo dzinofamba-backspace kuenda shure kusvika yakarurama yakakwirira.
Smokesystem: pane bhatani nokuda toggling chena mhepo vanoratidza apfungaire / kure pamusoro kuruboshwe mabhatani boka.
AI Aircraft Labels: pane bhatani nokuda toggling ari AI pamapepa ndege musi / kure pamusoro kuruboshwe mabhatani boka. Izvi zviri maererano default kana uine zviri panzvimbo yenyu vanoratidza kusarudza, saka icharatidza tsvuku rugwaro bhatani.
MultiPlayer: yakaderera-Poly kwirirei the womuenzaniso chinobatanidzwa sezvo nezvechisarudzo vanobhururuka sezvo * mutambi ndege * muna multiplayer muzvirongwa. Hazvisi ane AI womuenzaniso sezvo vakadaro.
Eurofighter Dutu AlphaSim FSX & P3D Download
Downloads: 31 729
Downloads: 32 111
Downloads: 20 183
Downloads: 30 738
Downloads: 7 813